Sipinachi, Strawberry uye Fig Salad neUchi Vinaigrette | Kicheni Mapepa
Ndinoreurura. Sipinachi, sitirobheri uye saradhi yemuonde neuchi vinaigrette ndeimwe yezvandinoda. Zvichida zvinokanganisa kuti mwaka wemashirobheri ipfupi uye saka inguva yekunakirwa nesaladhi iyi futi. Izvo zvakare zvakareruka zvakanyanya kugadzirira. Ndezvipi zvimwe zvaungabvunze musaradhi?
Zvinhu zvitatu uye kupfeka zvakapusa. Iyi saladhi ndeimwe yeaya humbowo hwekuti kupfava kunogona zvakare kutipawo kugutsikana. Kuigadzirira iri nyore kwazvo uye inova imwe nzira yakanaka seyokutanga kosi inoteverwa nehuku yakakangwa ine cider kana zvimwe Peppers yakasungwa.
Inogona zvakare kushandiswa seyakareruka chisvusvuro inofambidzana nesaladi yevamwe madiki magirazi echizi uye maapuloauce. Iyo inogara ichiita senge imwe nzira huru kwandiri. Iwe unongo fanirwa kuzviedza uye kundiudza kuti iwe kana kwete iwe unobvumirana neni.
Sipinachi, sitirobheri uye maonde saradhi ane chiuru vinaigrette kushamisika nekureruka kwayo, zvichiita kuti ive huru yekutanga kana yekutanga kosi.
Recipe mhando: Salads
4 mashoma esipinashi
6 maonde akaomeswa
3 mashupuni emamwe maorivhi emhandara emafuta
1 teaspoon yeuchi
1 tablespoon yebharisamu vhiniga
Isu tinosuka sipinashi, bvisa miswe uye ucheke kuita zvidimbu kana yakakura.
Isu tinoisa sipinashi mundiro ye saladi uye pane izvi the sitirobheri nemaonde zvakachekwa.
Pashure isu tinogadzirira vinaigrette. Kuti uite izvi, sanganisa mafuta, uchi, vhiniga uye pini yemunyu uye mhiripiri mundiro.
Takarova neforogo uye tinodurura pamusoro pe saladhi.
Isu tinoshumira sipinashi, sitirobheri uye saradhi yemuonde neuchi nyowani vinaigrette.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Salads » Sipinachi, Strawberry uye Fig Salad neUchi Vinaigrette